Taageerada Gaadiidka ee Xirfadleyda Daryeel Caafimaad ayaa laga sii wadaa Konya | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia42 KonyaTaageerada Gaadiidka ee Xirfadleyda Daryeel Caafimaad ayaa laga sii wadaa Konya
30 / 04 / 2020 42 Konya, Gobolka Central Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Taageerada gaadiid ee xirfadleyda daryeelka caafimaadka ee Konya ayaa sii socota
Dowlada Hoose ee Magaalada Konya waxay baska siinaysay shaqaalaha caafimaadka Konya ilaa iyo maalintii ugu horeeysay ee lagu soo rogo bandowga. Xaddidaadda 3-maalmood ee bandoowga, Metropolitan waxay sii wadi doontaa inay siiso xirfadleyda daryeelka caafimaad helitaanka cisbitaalada iyo meelaha ay joogaan.
Dowladda Hoose ee Magaalada Konya waxay sii wadi doontaa inay siiso helitaan xirfadlayaal daryeel caafimaad oo ka shaqeeya isbitaalada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladeed ee bandowga lagu xakameynayo cudurka coronavirus.
Duqa Magaalada Konya ee Magaalada Uurur İbrahim Altay ayaa u mahadceliyay dhamaan xirfadleyaasha daryeelka caafimaad ee dadaalka adag ka qaatay la dagaalanka cudurka 'coronavirus', wuxuuna xasuusiyay in shaqaalaha daryeelka caafimaadku ay ka taxadaraan talaabooyinka ay qaadayaan si looga hortago in gaadiidku dhibaato kuhelo maalinta ugu horeysa markii viruska lagu arko wadankeena.
Isagoo sheegay inay sii wadeen adeega gaadiid si looga hortago in shaqaalaha daryeelka caafimaadka loo dhibaateeyo laga bilaabo maalinta bandoowga la bilaabay, Duqa magaalada Altay ayaa yidhi, “Iyadoo la raacayo tillaabooyinka ka dhanka ah coronavirus, bandoow 1-maalmood oo kale ayaa la fulin doonaa jimcaha, 3da may. Hawshan, waxaan sii wadi doonnaa gaadiidka xirfadleydayada daryeelka caafimaad ee ka shaqeeya isbitaalada dowliga ah iyo kuwa gaar loo leeyahay. Wax kastoo aan ku samaynno xirfadlayaalkeenna daryeelka caafimaadka oo noloshooda noo caddeeya. Waxaan rajeynayaa inaan sida ugu dhakhsaha badan uga gudbi doonno howshan go'aankooda iyo go'aan qaadashada muwaadiniinta aan wada shaqeyno sida ugu dhaqsaha badan.
'Taageerada Imaanshaha Imaatinka-Amaahda Nolosha Ganacsiga Yaryar' ee laga helo Halkbank
Gaadiidka u keena Bixiyayaasha Daryeelka Caafimaadka ee Kocaeli waa bilaash
Daraasad sahlan oo ku saabsan tareenka xawaaraha sare ee Konya-Antalya ayaa sii waday xawaare buuxa
Taageerada Metrobus ee Taageerada Gaadiidka
Tababarka mihnadlayaasha si loogu wado baabuurta Marmaray